Sidii uu rasuul Bawlos u qoray Kolosay 1,21: 22-XNUMX: “In kastoo aad shisheeyayaal ah oo cadowgoodana xumaanta ku jirteen, haatan wuxuu idinkula heshiiyey dhimashadiisa dhimashadiisa, inuu isagu quduus noqdo oo eedla'aan iyo eedla'aan idiin noqdo. Weji ka waji. ”
Bawlos wuxuu waxyaalahan u qoray kaniisadda Rome ku yidhi: "Waayo, haddii Ilaah la heshiisiiyay dhimashadii wiilkiisa markii aannu weli cadowgan ahayn, intee in ka sii badan ayaa nafteena badbaadin doona hadda kadib markaan heshiis la gelano" (Rooma) 5,10:XNUMX).
Bawlos wuxuu noo sheegayaa inaysan halkaa ku joogsanaynin: “Laakiin waa Ilaaha inagula heshiiyey naftiisa Masiixa oo ina siiyey xafiis ku wacdiya dib u heshiisiinta. Maxaa yeelay, Ilaah wuxuu ku jiray Masiixa, wuuna kula heshiiyey dunida naftiisa, kumana tirin dembiyadooda iyaga ka gees ah… ”(2 Korintos 5,18-19).
Dhowr Aayadood ka dib Bawlos wuxuu qoray sida Eebbe Masiix ugula macaamilooday adduunka oo dhan isagoo leh: "Maxaa yeelay, waxaa Ilaah ka farxiyay in wax kasta oo isaga ku dhex jira oo isaga ku dhex jira, isaga wax walbana kula heshiisa, ha ahaato dhulka ama waxa ku jiraba. Jannada adoo ku nabdaynaya dhiigiisa iskutallaabta ”(Col 1,19-20).